Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း)
Nadi မှ ရေးသားသည်။ 22/03/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းဆိုသည် ရေပြည့်နေသောအိတ် သည် သားဥအိမ်အတွင်းသို့မဟုတ် သားဥအိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်းမများတွင် သားဥအိမ်နှစ်လုံးရှိသည်။ တစ်ခုစီသည် မက်မွန်သီးကဲ့သို့အရွယ်အစားပုံသဏာန်ရှိသည်။ သားအိမ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရှိသည်။ သားဥသည် သားဥအိမ်အတွင်းတွင်ကြီးလာပြီး ကလေးမွေးဖွားနိုင်သော ရာသီစက်ဝန်းအတွင်းထွက်လာသည်။
မိန်းမအများစုသည် သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းတခါတရံရှိတတ်သည်။ သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းအများစုသည် အနည်းငယ်သို့မဟုတ် လုံးဝအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေခြင်း နှင့် အန္ဓါရယ်လဲမပေးပါ။ များသောအားဖြင့် ကုသမှုမလိုပဲ လပိုင်းအနည်းငယ်တွင်ပျောက်သွားတတ်သည်။
သို့သော် သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း များသောအားဖြင့် ပေါက်သွားပါက – တခါတရံ ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများပြတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အရေးကြီးသောလက္ခဏာများကိုသိထားခြင်းနှင့် ပုံမှန် တင်ပါးစုံတွင်းသို့စမ်းသက်ပြုလုပ်မှုများလုပ်သင့်သည်။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
များသောအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပဲ သူ့ဟာသူသက်သာသွားတတ်သည်။ ရေအိတ်ကြီးပါက ဗိုက်နေထိုင်မကောင်းခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ အကယ်၍ ရေအိတ်အကြီးက ဆီးအိတ်ကိုဖိပါက ဆီးခဏခဏသွားရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆီးအိတ်ခံနိုင်ရည်အားကျဆင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တင်ပါးစုံအတွင်းပိုင်းမှနာခြင်း။ ကိုက်ပြီး သင့်ကျောနောက်ဘက်နှင့်ပေါင်သို့ပျံသွားလိမ့်မည်။
ထိုသို့နာခြင်းသည် ရာသီမလာခင်နှင့် ရာသီလာပြီးပြီးချင်းတွင်ဖြစ်တတ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင်ခံစားရသော ပျို့ခြင်း အန်ခြင်းသို့မဟုတ် ရင်သားနာခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။
ဆီးအိတ်အားဖိပါက ဆီးခဏခဏသွားရခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးကုန်အောင်သွားရခက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ရုတ်တရက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် တင်ပါးစုံအတွင်းသို့မဟုတ် ဗိုက်မှနာခြင်း
နာခြင်းနှင့်တွဲ၍ ဖျားခြင်းသို့မဟုတ် အန်ခြင်းတို့ရှိခြင်း
ထိုလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် အရေးပေါ်လက္ခဏာများဖြစ်သည့် လက်ဖျားခြေဖျားအေးခြင်း အသက်ရူမြန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းမူခြင်း အားနည်းနေခြင်း-များသည် အရေးပေါ်ဆရာဝန်နှင့်တွေ့သင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းအလုပ်လုပ်နေရင်းမှ သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအရာကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေချိန်ဖြစ်သောရေအိတ်ဟုခေါ်သည်။ အခြားသော ရေအိတ်ပုံစံများကသိပ်အဖြစ်မများပါ။
ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေချိန်ဖြစ်သောရေအိတ်။ သင့် သားဥအိမ်တွင် ပုံမှန် ရေအိတ်ပုံသဏာန်ရှိသော ဖော်လစ်ကယ်များလစဉ်ကြီးထွားသည်။ ထိုဖော်လစ်ကယ်များသည် မဟော်မှန်းနှင့် ပရိုဂျတ်စတုန်းအားထုတ်ပြီး သားဥအားထုတ်ပေးသည်။ တခါတရံတွင် ထိုဖော်လစ်ကယ်များဆက် ကြီးထွားလာတတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေချိန်ဖြစ်သောရေအိတ်များဖြစ်တတ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိသည်။
ဖော်လစ်ကယ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရေအိတ်။ ရာသီစက်ဝန်းအလယ်ချိန်တွင် သားဥသည် ဖော်လစ်ကယ်အတွင်းမှဖောက်ထွက်လာပြီး သားအိမ်ပြွန်အတွင်းသို့ သုတ်ကောင်ရှာရန်ရောက်လာသည်။ တခါတရ့ထို ဖော်လစ်ကယ်များမပေါက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ် ဥအားမထုတ်တော့ပဲ ကြီးထွားလာပြီးရေအိတ်တည်လာတတ်သည်။
ကောပတ်လူတီယမ်ရေအိတ်။ ဖော်လစ်ကယ်မှသားဥထွက်လာပါက ထိုပေါက်ကွဲသွားသော ဖော်လစ်ကယ်များသည် မဟော်မှန်းနှင့် ပရိုဂျက်စတုန်းပမာဏအများကြီးကို ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ရန်ထုတ်ပေးရသည်။ ထိုအချိန်ရှိ ဖော်လစ်ကယ်ကို ကောပတ်လူတီယမ်ရေအိတ်ဟုခေါ်သည်။ တခါတရံ ဥထွက်လာသောအပေါက်မှပိတ်ပြီး အတွင်းတွင် အရည်များစုပုံလာကာ ကောပတ်လူတီယမ်အားရေအိတ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရစေသောဆေးတစ်မျိုး ကလိုမီဖင်း(ကလိုမစ် ၊ ဆီရိုဖင်း) သည် သားဥကြွေနှုန်းများစေပြီး သားဥကြွေပြီးပါကကောပတ်လူတီရမ်ရေအိတ်ဖြစ်နှုန်းကိုများစေသည်။ သို့သော်ထိုရေအိတ်များသည် ကိုယ်ဝန်အားအနှောက်အယှက်မပြုပါ။
ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေချိန်ဖြစ်သောရေအိတ်များသည် များသောအားဖြင့်အန္ဓါရာယ်မပေးပါ။ နာကျင်ခြင်းအားရှားရှားပါးပါးမှသာဖြစ်စေတတ်သည်။ သူဟာသူ ရာသီစက်ဝန်းနှစ်ခါ သုံးခါပြီးချိန်တွင်ပြန်ကောင်းသွားတတ်သည်။
အချို့သောရေအိတ်များသည် ပုံမှန် ရာသီစက်ဝန်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုရေအိတ်များမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ဒါးမွက်ရေအိတ်။ ထိုရေအိတ်များတွင် တစ်သျူးဥပမာ ဆံပင် အရေပြားသို့မဟုတ် သွားများပါတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရေအိတ်သည် လူဖြစ်စေသောဥများ၏ဆဲလ်များမှဖြစ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာသိပ်မဖြစ်တတ်ပါ။
စစ်အဒီနိုးမား။ ထိုရေအိတ်များသည် သားဥအိမ်တစ်သျူးများမှဖြစ်လာပြီး ရေကဲ့သို့သို့မဟုတ် ချွဲကဲ့သို့သောအရာများပါတတ်သည်။
အန်ဒိုမီတရီအိုးမား။ ထိုရေအိတ်များသည် သားအိမ်တစ်သျူးများအခြားနေရာတွင်တွေ့ရသောရောဂါများတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ အချို့တစ်သျူးများသည် သင့်သားဥအိမ်တွင်တွယ်ပြီး အလုံးဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ဒါးမွက် ရေအိတ်နှင့် စစ်အဒီနိုးမားသည် ကြီးလာပြီး သားဥအိမ်အား သူ့ပုံမှန်နေရာမှတွန်းရွေ့လိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် သားဥအိမ်လိမ်ပြီး နာကျင်ခြင်းဖြစ်တတ်သည်
ငါ့ဆီမှာ Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းသည် သားဥကြွေသောမိန်းမများတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ သွေးဆုံးပါက ရေအိတ်ဖြစ်နှုန်းနည်းသည်။ အကယ်၍ ရာသီဆုံးပြီးရေအိတ်တွယ်ပါက သားဥအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းပိုများသည်။
၈ရာခိုင်နှုန်းသော ရာသီသွေးမဆုံးမီကာလမိန်းမများတွင် ကုသမှုလိုအပ်သည့် ရေအိတ်ကြီးများအားတွေ့နိုင်သည်။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းအား တင်ပါးစုံစမ်းသက်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်သည်။ အကယ်၍ရေအိတ်ဟုသံသယရှိပါက သူ့အမျိုးအစားနှင့်ကုသမှုလိုမလိုစမ်းသက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ဆရာဝန်မှ ရောဂါအတည်ပြုရန်နှင့် ကုသမှုကိုအထောက်အကူရရန် မေးခွန်းများစွာမေးလိမ့်မည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ။ ရေ အခဲ သို့မဟုတ် အရောနှင့်ပြည့်နေပါသလား။ ရေပြည့်နေသော ရေအိတ်သည် ကင်ဆာသိပ်မဖြစ်တတ်ပါ။ ခဲခြင်းသို့မဟုတ် ရေနှင့်အခဲအရော သည် ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်ခွဲရန် နောက်ထပ်စမ်းသက်မှုများလိုနိုင်သည်။
ရေအိတ်အမျိုးအစားခွဲရန် အောက်ပါ စမ်းသက်မှုများလုပ်လိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစမ်းသက်ခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းကသင့်ရေအိတ်သည် ကောပတ်လူတီရန် ရေအိတ်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
တင်ပါးစုံရိုးဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ ကြိမ်ကဲ့သို့သော အရာမှ မြင့်နှုန်း တုံခါနှုန်းများသောလှိုင်းများအား ပို့လွှတ်ခြင်း ရယူခြင်းများလုပ်ပြီး သင့် သားအိမ်နှင့် သားဥအိမ်အား မြင်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်မှ ရေအိတ်ဟုတ်မဟုတ် ကိုအတည်ပြုပေးခြင်း နေရာကိုသိစေနိုင်ခြင်း နှင့် ပြည့်နေသောအရာက အခဲ သို့မဟုတ် အရည်ကိုခွဲခြားသိနိုင်သည်။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်း-ပါးပြီး ပေါ့သောအရာအား သင့်ဗိုက်အတွင်းကိုအနည်းငယ်ခွဲစိတ်၍ထည့်သည်- ဆရာဝန်မှသင့် သားဥအိမ်ကိုမြင်နိုင်ပြီး ရေအိတ်လဲဖယ်နိုင်သည်။ မေ့ဆေးပေး၍လုပ်ဆောင်ရန်လိုသော ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စီအေ ဝမ်းတူးဖိုက် ပမာဏ။ ကင်ဆာပဋ္ဋိပစ္စည်း ဝမ်းတူးဖိုက်သည် သားဥအိမ်ကင်ဆာရှိသောမိန်းမများတွင်တက်တတ်သည်။ အကယ်၍ သားဥအိမ် ရေအိတ် သည် အခဲတဝက်ဖြစ်နေပါက ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းများသည့်အတွက် ဆရာဝန်မှ စီအေ ဝမ်းတူးဖိုက်ပမာဏကို သွေးထဲမှတိုင်းခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သိနိုင်သည်။ စီအေဝမ်းတူးဖိုက် တက်နေခြင်းသည် ကင်ဆာမဟုတ်သောအခြေအနေတွင်လည်းတက်နိုင်သည် ဥပမာ – သားအိမ်ရှိ ဆဲလ်များအခြားနေရာသိုေ့ရာက်နေခြင်း၊ သားအိမ်အကျိတ် ရှိခြင်းနှင့် နှာတာရှည် သားအိမ် သားအိမ်ပြွန်နှင့် မအဂါီယောင်ယမ်းခြင်း။
Ovarian Cysts (သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် အသက် ရေအိတ် အမျိုးအစား အရွယ်အစားအပေါ်မူတည်ပြိးပြောင်းလဲသည်။ ဆရာဝန်မှအောက်ပါတို့ကိုအကြံပြုနိုင်သည်။
စောင့်ကြည့်ခြင်း။ များသောအားဖြင့် စောင့်ကြည့်ပြီး လပိုင်းအနည်းငယ်အတွင်းရေအိတ်သူဟာသူပျောက်သွားခြင်းရှိမရှိကိုပြန်စမ်းနိုင်သည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောနည်းလမ်းတမျိုးဖြစ်သည်-အသက်အရွယ်အပေါ်မမူတည်- သင့်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများမရှိပါက သင့် ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်တွင် သေးပြီးရေရှိရေအိတ်အားပြပါကရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆရာဝန်မှ တင်ပါးစုံအတွင်းပိုင်း ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ရန်အကြံပေးနိုင်သည်။ ထိုသိုရိုက်ခြင်းဖြင့် ရေအိတ် အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကိုသိနိုင်သည်။
သန္ဓေတားဆေးသုံးခြင်း။ ဆရာဝန်မှ နောက်ရာသီစက်ဝန်းတွင် ရေအိတ်အသစ်မပေါ်ရန် သန္ဓေတားဆေးအားညွှန်ကြားနိုင်သည်။ သောက်သုံးရသော သန္ဓေတားဆေးသည် သားဥအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ သောက်ချိန်ကြာလေလေ ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းလျော့လေလေဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်ခြင်း။ အကယ်၍ ရေအိတ်သည်ကြီးပါက ပုံမှန်ဖြစ်သောရေအိတ်နှင့်မတူပါက ဆက်ကြီးနေပါက သို့မဟုတ် ရာသီစက်ဝန်းနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဆက်ရှိနေပါက ခွဲထုတ်ရန် ဆရာဝန်မှအကြံပေးလိမ့်မည်။ နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ် အခြားလက္ခဏာများပြပါက ရေအိတ်ကိုခွဲထုတ်နိုင်သည်။
အချို့သောရေအိတ်များကို ရေအိတ်သီးသန့်ဖြတ်ထုတ်နိုင်သည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်
အကယ်၍ ထိုရေအိတ်သည် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါက ဆရာဝန်မှ သားအိမ်နှင့် သားဥအိမ်နှစ်လုံး သားအိမ်ပြွန်ပါ ဖြတ်ထုတ်လိမ့်မည်။ ထို့ပြင် ရေအိတ်သည် ရာသီသွေးဆုံးချိန်မှပေါ်လာပါကလည်း ခွဲထုတ်ရန် အကြံပေးလိမ့်မည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် သားဥအိမ်တွင်ရေအိတ်တည်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အရက် ကော်ဖီ ပြည့်ဝဆီနှင့် သကြားဓါတ်ရှောင်ပါ။
အပြည့်အဝမချက်ပြုတ်ရသောအစာအားစားပါ( ပဲတောင့်ရှည် အသီးအရွက် မြေပဲ အစေ့)
အော်ဂယ်နစ်မပါသောအစာ ဥပမာ နို့ထွက်ပစ္စည်း အသားတိုအားပိုစားပါ။
Ovarian cysts. http://www.ndhealthfacts.org/wiki/Ovarian_Cysts. Accessed 10 Jan 2017
Ovarian cysts. http://www.healthline.com/health/ovarian-cysts. Accessed 10 Jan 2017
Ovarian cysts. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ovarian-cysts/basics/definition/con-20019937. Accessed 10 Jan 2017